အရေးပေါ် အခြေအနေအတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှု – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
အရေးပေါ် အခြေအနေအတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှု
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များဖြစ်သည့် ရေဘေး၊ လေဘေး၊ ငလျင်ဘေးများအပါအ၀င် ရန်သူမျိုး ငါးပါးကြောင့် အရေးပေါ် အခြေအနေတစ်ရပ် ပေါ်လာချိန်တွင် မိသားစုတစ်စုအနေနှင့် ပြဿနာအမျိုးမျိုးအား မည်သို့မည်ပုံ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းကြကို ကြိုကြိုတင်တင် တိုင်ပင် ဆွေးနွေးထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဆွေးနွေးရာတွင် အောက်ပါအချက်များကို စဉ်းစားထားသင့်ပါသည်။
မည်သည့် အချိန်တွင် မိသားစုဝင်များသည် ဘေးကင်းရာသို့ သွားကြမည်နည်း?
မည်သည့်နေရာကို သွားမည်နည်း၊ အစုလိုက်သွားမည်လော၊ မှီခိုသူများသာ သွားကြမည်လော၊ လူခွဲသွားမည်လော?
ဘေးကင်းရာတွင် အခြားမိသားစုများနှင့်အတူ နေရမည်ဆိုလျှင် လနှင့်ချီပြီး နေသင့်ပါသလော?
အခြေအနေအရ တစ်ယောက်တကွဲစီ ဖြစ်နေခဲ့သော် မည်သည့်နေရာတွင် ဆုံကြမည်နည်း?
မိသားစုဝင်များ အားလုံးအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်းများကို တစ်နေရာတည်းတွင် စုစည်းထားရှိကာ လုံခြုံသောနေရာတစ်ခုတွင် အလွယ်တကူ ရှိနေစေသင့်ပါသည်။ သားရေသေတ္တာငယ်ကဲ့သို့ ထည့်စရာ တစ်ခုတည်းတွင် အားလုံး စုဆောင်းသိမ်းဆည်းထားပြီး မိတ္တူကို ဘဏ်လုံခြုံရေးသေတ္တာ သို့မဟုတ် တခြားတစ်မြို့တစ်ရွာရှိ ဆွေမျိုးသားချင်းတစ်ဦးဦးထံတွင် အပ်နှံထားရန် စဉ်းစားသင့်ပါသည်။
ဆေးမှတ်တမ်းများ၊ သွားမှတ်တမ်းများ၊ ဆေးထိုးမှတ်တမ်းများနှင့် လိုအပ်သော ဆေးဝါးများ
မိဘနှစ်ပါးစလုံး သေဆုံးသွားလျှင် အရွယ်မရောက်သေးသော ကလေးများအား အစဉ်တစိုက်အုပ်ထိန်းမည့်သူများကို ပြဋ္ဌာန်းပေးထားသော သေတမ်းစာ (သို့မဟုတ်) မှာကြားစာ
ကျောင်းမှတ်တမ်းများ၊ လက်ရေးမူများ၊ စာမေးပွဲ ရမှတ်များနှင့် ထောက်ခံစာများ
နိုင်ငံတကာတွင်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတွင်းဖြစ်စေ၊ နှစ်ရပ်စလုံးအတွက်ဖြစ်စေ မောင်းနှင်ခွင့်ရှိသော ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်များ၊ မော်တော် ယာဉ်မှတ်ပုံတင်နှင့် အာမခံ စာရွက်စာတမ်းများ
ဘဏ္ဍာရေးစာရွက်စာတမ်းများ။ ဘဏ်စာရင်း၊ ဝင်ငွေခွန်မှတ်တမ်းများ၊ အစုရှယ်ယာလက်မှတ်များ။
မွေးစာရင်းများ၊ မွေးစားမှုမှတ်တမ်းများ၊ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု စာရွက်စာတမ်းများ
နိုင်ငံသား (မှတ်ပုံတင်များ၊ နိုင်ငံသားလက်မှတ်များ)၊ ထိမ်းမြားခြင်း/ကွာရှင်းခြင်း စာရွက်စာတမ်းများ။
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မှတ်တမ်းများ၊ အလုပ်ခန့်စာ၊ အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ်များ။
ဆရာဝန်များ၊ ရှေ့နေများနှင့် အခြား အရေးကြီးသော ကျွမ်းကျင်သူများ၏ လိပ်စာများ/ဖုန်းနံပါတ်များပါဝင်သည့် လိပ်စာစာအုပ်
အဖျင်းဆုံး (ခရီးသွားချက်လက်မှတ်များအပါအဝင်) ငွေသားအနည်းငယ်၊ (နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်ဖြစ်လျှင်) ချက်လက်မှတ်စာအုပ်နှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် သုံးစွဲနိုင်သည့် ကြွေးဝယ်ကဒ်တို့ လက်ဝယ်ရှိနေအောင် ဆောင်ရွက်ပါ။ တချို့သူများသည် အလွယ်တကူ ထုတ်သုံးနိုင်ရန် ငွေသား အနည်းငယ် (အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃ – ၄၀ဝ/-ခန့်မျှ တန်ဖိုးရှိသော ငွေ)ကို အရေးပေါ်ကိစ္စအတွက် သတ်သတ် သိမ်းထားတတ်ကြပါသည်။
မိသားစုတစ်စုအတွက် အသုံးဝင်သော ပစ္စည်းအချို့မှာ –
မျက်မှန်အပို/မျက်ကပ်မှန်နှင့် လတ်တလောသုံးစွဲရမည့် ဆေးဝါးများ
ဘက်စုံသုံး ဓားနှင့် စည်သွပ်ဘူးဖောက်တံ
တန်ဖိုးအမျိုးမျိုးရှိသော (ဝါ) အကြွေများအပါအဝင် ဒေသသုံးပိုက်ဆံနှင့် အခြားဒေသသုံးငွေကြေးများ
ကြိုတင်ထုတ်ပိုးထားသော အစားအသောက်နှင့် ပလတ်စတစ် ပန်းကန်ခွက်ယောက်များ
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ခြေစောင့်လက်စောင့် ပစ္စည်းများ
အိမ်တွင် ပိတ်မိနေမည်ဆိုပါက၊ သို့မဟုတ် မြို့တွင်းရှိ ဆိုင်များ ပိတ်ထားမည်ဆိုပါက အသုံးပြုနိုင်ရန် အိမ်တွင် အချို့သောပစ္စည်းများကို သိမ်းဆည်းထားသင့်ပါသည်။
အရေးပေါ်အခြေအနေအတွက် ရေကို မည်သို့သိုလှောင်ထားမည်ကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါသည်။ အစားအသောက်များမှာ အခြောက်အခြမ်းများနှင့် ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် ထားရန်ဖြစ်စေ၊ ပြန်လည် ချက်ပြုတ်ရန်ဖြစ်စေ မလိုအပ်လှသော စည်သွပ်ဘူးများကဲ့သို့ ရိုးစင်းလွယ်ကူသော အစားအစာများ ဖြစ်သင့်ပါသည်။ သောက်ရေ ၄-၅-၆ ဂါလံမှာ အမြဲတန်း အဆင်သင့်ရှိနေရမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းရေကို သိုလှောင်ထားရန်အတွက်သာ ကန့်သတ်ထားသင့်ပါသည်။ (ဆိုလိုသည်မှာ နေ့စဉ်သောက်သုံးရန် မဟုတ်ပါ။) အရေးပေါ် ကာလများအတွင်း အသုံးပြုနိုင်ရန် ခုနစ်ရက်စာ ရေနှင့်အစားအသောက်များ အိမ်တွင် တစ်ချိန်လုံးရှိနေအောင် ဆောင်ရွက်ထားသင့်ပါသည်။
Author lettwebawPosted on 26 March 2011 26 March 2011 Categories Uncategorized
Previous Previous post: ငလျင်အတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ဖို့နဲ့ ငလျင်လှုပ်ရင် ခိုအောင်းဖို့
Next Next post: တီကောင်နဲ့ လိပ်ပြာ